Fampahafantarana ny «Veliranon’Iarivo»: fanambin’ny kandidà Naina ny hanarina an’Antananarivo | NewsMada
Nanomboka ny fampielezan-keviny tao amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny kandidàn’ny IRK, Andriantsitohaina Naina, omaly. Nampahafantariny tamin’izany ny “Veliranon’Iarivo”, ahitana ireo vina sy tetikasa hanarenana ity Renivohitra ity.
“Nahalalan’ny maro ahy ny fitanako ny teny nomena. Tsy ho mora izany nefa vitantsika io… Hanenjika ny fahatarana isika. Tsy vola na voninahitra ny antsika… Madio izahay miditra eo… Madio koa izahay mivoaka”, hoy ny ampahan’ny lahatenin’ity kandidà laharana fahefatra ity. Nanentana ny rehetra ny tenany hifidy sy handatsa-bato ho azy sy ny mpanolotsaina miaraka aminy, laharana faharoa. Notsiahiviny tamin’izany fa efa nahatety fokontany miisa 105 ny tenany sy ireo mpiara-dia aminy. “Hitako ny zava-misy iainan’Antananarivo. Nihaino ny mponina aho isaky ny fokontany. Voaraiko ireo faniriana, ny filàna ary ny fahasahiranan’ny mponina”, hoy izy. Miantso fiaraha-miasa ny kandidàn’ny IRK hitondra fiovan’ny foto-pisainana. Hamerina ny hasin’ny soatoavina malagasy, ny firaisankina, ny fiaraha-mientana ho an’ny mponin’Antananarivo manontolo tsy ankanavaka. “Hiara-kiasa isika ho an’ny fampandrosoana iarahan’ny tsirairay ary mahasahana ny mponina manontolo, indrindra ireo marefo. Tokony hotohanana sy hampiana ireo tena sahirana ho tafiditra eo amin’ny sehatry ny asa ka hanana fidiram-bola sy handray anjara amin’ny toekaren’ny fiarahamonina. Hatao laharam-pahamehana ireo fotodrafitrasa, mbola tsy misy ankehitriny”, hoy ihany izy.
Ady amin’ny kolikoly sy ny fitantanana mangarahara
Natsidiny sahady fa hanana Renivohitra hametraka fandraharahana ho ivon’ny fandrosoana toekarena isika. Hapetraka ho laharam-pahamehana ny fotodrafitrasa lehibe ho an’ny tanàn-dehibe sy toekarena. Hifototra amin’ny mangarahara ny fitantanana, ny ady amin’ny kolikoly, ary ny tamberin’andraikitra, araka ny nambarany. Tsy vitan’izany. “Laharam-pahamehana ny fiarovana ny fananam-bahoaka sy ny mponina, ny firindran’ny fifamoivoizana, ny fahadiovana ary ny fanajana ny tontolo iainana… Ho tanànan’ny Malagasy rehetra Antananarivo ary ho reharehany koa”, hoy ny kandidà laharana fahefatra. Anisan’ny “Veliranon’Iarivo” ny fanatsarana sy ny fanohanana ny mahasoa ny mponina. Ny ady amin’ny kolikoly sy fitantanana mangarahara eo anivon’ny kaominina. Ny fijerena ireo tsenakely, fototry ny fandrosoan’ny toekaren’ny tanàna, ny fandraharahana antoky ny fampandrosoana.
Toeram-ponenana mendrika sy ny fitohanan’ny fifamoivoizana
Ny fametrahana Antananarivo, tanàna maitso. Antananarivo, renivohitry ny kolontsaina sy ny tantara ary ny fampidoboroboana ny toeram-ponenana mendrika sy fanomezan-danja ireo tanàna miorina.
Vory lanona tanteraka ireo mpanohana, ny olon-tsotra, ny fikambanana, ny mpandraharaha, ny antoko politika sy ny mpanao politika maro niatrika izany. Teo koa ireo mpanakanto nanafana tamin’ny alalan’ny hira fanevan’ny kandidà Andriantsitohaina Naina. Hidina eny ifotony avy hatrany ny kandidà sy ny mpomba azy anio.